အေးပြီးပူသောအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူဟုသူတို့ခန့်မှန်းကြသနည်း။ အ | သိမှုလေ့ကျင့်ရေး
ယခုအခါ၎င်းကိုတည်ထောင်ပြီးအမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ရှုထောင့်များစွာနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်ကိုသိသည်။ ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်ရန် Creativeဖတ်နိုင်စွမ်း၊ စာသား၏နားလည်မှု, မှာ သင်္ချာစွမ်းရည်မှာ ဘာသာစကား လူအပေါင်းတို့ ''ကြူးကျြောမှု.
သို့သော်အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၏အရေးကြီးသောကဏ္aspectsများအပေါ်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်သုတေသနကိုအများအားဖြင့်ခေါ်သည် အအေးအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆိုလိုသည်မှာ ပို၍ သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုများမှကင်းလွတ်သည် (ဥပမာ၊ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်သိမှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်တားစီးနိုင်မှု); ပူတာကိုခေါ်တဲ့ hot executive functions တွေအစားအများကြီးပိုပြောကြတယ်၊ ဆိုလိုတာက (အထူးသဖြင့်စိတ်ပိုင်းနဲ့လှုံ့ဆော်မှုရှုထောင့်ကလွှမ်းမိုးရင်)၊ စိတ်ခံစားမှုထိန်းချုပ်မှု၊ စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရှာဖွေတာနဲ့အဲဒါတွေကိုရွှေ့ဆိုင်းနိုင်မှု မရ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Poon ထို့ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တစ်စုသည်ကျောင်းစာသင်ယူမှုနှင့်၎င်းတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတို့ကိုလေးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များသည်အထူးစံသတ်မှတ်ထားသောဘက်ထရီမှတဆင့်အအေးနှင့်အပူနှစ်ခုစလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကဲဖြတ်ခြင်းခံရသည်။
စာရေးသူ၏ကိုယ်ပိုင်ဆောင်းပါး၌ပြောသောအရာများရှိသော်လည်းအအေးဓာတ်အကဲဖြတ်ရန်စမ်းသပ်မှုအားလုံးသည်အအေးဓာတ် (အာရုံစူးစိုက်မှုထိန်းချုပ်မှု၊ အလုပ်လုပ်မှုမှတ်ဥာဏ်ကိုတားဆီးနိုင်ခြင်း၊ သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်း) နှင့်ပူခြင်း (ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း) တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်နွယ်မှုမရှိသလောက်ဘဲ၊ (အမြင့်ဆုံးဆက်စပ်မှု၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှုအဆင့်သို့ရောက်ရန်တစ် ဦး တည်းသာရှိခဲ့သည်) r = ၀.၁၈); ဒါကငါတို့ကို Miyake နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေပြောခဲ့တဲ့အရာနဲ့အညီ hypothesize လုပ်နိုင်တယ်အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ကွဲပြားသောအစိတ်အပိုင်းများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအတော်လေးကွဲလွဲနေသည်။
သေချာတာကတော့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်က၊ အသိဥာဏ်အဆင့်လွှမ်းမိုးမှုရဲ့အသားတင်၊ အအေးအမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ကိုခန့်မှန်းခဲ့ကြသည် ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည် စဉ် ရင်းနှီးသောအမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်လျောညီထွေမှု.
နောက်ဆုံးအချက်အနေနှင့်အခြားမှတ်သားစရာအချက်မှာအသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အတွင်းဤသုတေသန၌သုံးသောစာမေးပွဲများ၏ရမှတ်လမ်းကြောင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နှုတ်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် အသက် (၁၅) နှစ်ဝန်းကျင်တွင်လျင်မြန်စွာတိုးလာခြင်းကိုပြသသည် (ဤသုတေသနတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအပိုင်း၌) အသက်အရွယ်နှင့်အတူစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုပြသည်။ နောက်ပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုထိန်းချုပ်မှု ဤအသက်အုပ်စုတွင်အဆက်မပြတ်ကြီးထွားနေသည်။ ဟိုမှာ သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အသက် ၁၆ နှစ်အထိအဆက်မပြတ်တိုးလာပုံရသည်။ ထို့အတူစွမ်းရည်၊ တားစီး ၁၃ မှ ၁၆ အထိမြင့်တက်လာသည်ကိုပြသည်။ ဟိုမှာ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်အသက်အရွယ်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုကိုပြသည်၊ သို့သော်အသက် ၁၇ နှစ်ဝန်းကျင်တွင်အမြင့်ဆုံးတိုးတက်ခြင်းကိုပြသည်။
အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည် ရင်းနှီးသောအမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အသက် ၁၂ မှ ၁၇ နှစ်ကြားလမ်းကြောင်းသည်ခေါင်းလောင်းပုံ (သို့မဟုတ်ပြောင်းပြန် "U") ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်အသက် ၁၄-၁၅ နှစ် ၀ န်းကျင်တွင်ယခင်နှင့်နောက်ဆက်တွဲခေတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွေ့ရသည်။ ပို၍ တိကျသည်၊ ဤအသက်အုပ်စုတွင်စွန့်စားရမှုပိုမိုကြီးမားစေသောအရာနှင့်သေးငယ်သောချက်ချင်းလက်ငင်းကျေနပ်မှုများ (အချိန်နှင့်ပိုဝေးသောသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်)
အေးစက်သောအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ပတ်သက်၍၊ အဟန့်အတား၊ အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်နှင့်သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်မှုတို့သည်စီစဉ်ခြင်းထက်စော။ ရင့်ကျက်လာသည်။ ထို့ကြောင့်ယခင် (ပို၍ အခြေခံ) သည်နောက်ဆုံး (ပိုမြင့်သောအမိန့်) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။
ပူပြင်းသောအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပြောင်းပြန်အကဲခတ်ထားသော "U" ပုံစံသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်မကြာခဏတွေ့ရလေ့ရှိသောစွန့်စားအပြုအမူများအတွက်အလားအလာပိုများလာသည်ကိုရှင်းပြနိုင်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အေးသောအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်စမ်းသပ်မှုများနှင့်ပူပြင်းသောအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်ကွဲပြားသောတည်ဆောက်ချက်များကိုအမှန်တကယ်တိုင်းတာပုံရသည်။ အမှန်မှာယခင်ကပိုသိမြင်မှုရည်မှန်းချက်များ (ဥပမာကျောင်းစွမ်းဆောင်ရည်) ၏အောင်မြင်မှုနှင့်ပိုသက်ဆိုင်ပုံရသည်။ နောက်ဆုံးအရာများသည်လူမှုရေးနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များနှင့် ပို၍ ဆက်စပ်သည်။
“ ပရိုဂရမ်းမင်း” အမှုဆောင်အရာရှိများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ coding မူကြိုကျောင်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်း
တေးဂီတဖွင့်ခြင်းသည်သင့်ကို ပို၍ စမတ်ကျစေသလော။
ကျောင်း၌အလုပ်အမှုဆောင်တာ ၀ န်များကိုပိုမိုခိုင်မာစေရန်
မူကြိုကျောင်းမှအလုပ်အမှုဆောင်တာ ၀ န်ယူမှုအပိုင်း ၂
အအေးမိအလုပ်အမှုဆောင်: Alzheimer vs. frontotemporal စိတ်ဖောက်ပြန်
Miyake, A. , Friedman, NP, Emerson, MJ, Witzki, AH, Howerter, A. , & Wager, TD (၂၀၀၀) ။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်ကွဲပြားမှုများနှင့်ရှုပ်ထွေးသော“ frontal lobe” လုပ်ငန်းများတွင်၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးမှုများ: ငုပ်လျှိုးနေသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ သိမှုစိတ်ပညာ, 41(1), 49-100 ။
Poon, K. (2018) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ပူ။ အေးသောအလုပ်အမှုဆောင်တာဝန်များ စိတ်ပညာ Frontiers, 8, 2311 ။
အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ, ရင်းနှီးသောအမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ, အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်လျောညီထွေမှု, အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းများနှင့်ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်, အအေးအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို, အအေးနှင့်ပူအမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ
“ ပရိုဂရမ်းမင်း” အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ - ကျောင်းနေအရွယ်၌အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းနှင့်တားမြစ်ခြင်းများအပေါ်သက်ရောက်မှု
ထူးချွန်သောကလေးများ - အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးခွဲခြားပါ
semantic fluences တွေကဘာတွေလဲ၊ ဘာကြောင့်သုံးကြတာလဲ။
စိတ်၏ "ကျွမ်းဘား" အတွက်အသုံးဝင်သောအကြံပေးချက်များ: Cognitivefun
အရည်အချင်းထောက်လှမ်းရေးနှင့်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားဆက်နွယ်မှုဆောင်းပါးများ၊ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေး